Shivaraj Online | इजरायल रोजगारीका लागि साढे ९ हजारभन्दा धेरैको आवेदन, परीक्षा कहिले ? - Shivaraj Online इजरायल रोजगारीका लागि साढे ९ हजारभन्दा धेरैको आवेदन, परीक्षा कहिले ? - Shivaraj Online
इजरायल रोजगारीका लागि साढे ९ हजारभन्दा धेरैको आवेदन, परीक्षा कहिले ?
काठमाण्डौ – १ हजार जनाको माग भएको इजरायल रोजगारीका लागि ९ हजार ६ सय ९९ जनाको आवेदन परेको छ ।
इजरायलमा सहायक कामदारका लागि एक हजार जनाको मागमा आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म गरी ९ हजार ६ सय ९९ जनाले आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागको इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर बहादुर सुनुवारले जानकारी दिनुभयो ।
७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषका गरी एक हजार जनालाई रोजगारीका लागि लैजाने भए पनि आवेदन दिनेको सङ्ख्या महिलाको भन्दा पुरुषको धेरै छ । विभागका अनुसार ४२ सय महिला र ५ हजार ४९९ जना पुरुषले आवेदन दिएका छन् ।
आवेदन दिनेहरू मध्येबाट योग्यता पुगेकाहरूलाई विभागले छनोट गर्नेछ ।
‘हामीले आजैदेखि आवेदन दिनुभएकाहरुको आवेदन रुजु गर्न थाल्छौँ, विभागले जुन योग्यता तोकेको छ त्यो योग्यता पुगेकाहरू छनोट हुनुहुन्छ, जसको योग्यता पुग्दैन उहाँहरुको आवेदन अस्वीकृति हुन्छ,’ इजरायल शाखा प्रमुख सुनुवारले भन्नुभयो ।
यदि आवेदन अस्वीकृत भएमा कारणसहित आवेदकलाई विभागले जानकारी गराउने छ । स्वीकृति भएमा वा अस्वीकृति भएमा पनि यसको जानकारी विभागले आवेदन दिँदा व्यक्तिले अनलाइन सिस्टममा राखेको फोन नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी गराउने छ ।
इजरायल रोजगारीको लागि आवेदन दिएका व्यक्ति २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । १.५ मिटर उचाइ र कम्तीमा ४५ केजी तौल आवश्यक पर्छ । अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान भए इजरायलको स्थानीय भाषा अनिवार्य छैन ।
इजरायलमा काम गरी फर्केका र बाबुआमा, पतिपत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास वा काम गरेकाको परिवारका सदस्यको पनि यो प्रक्रियामार्फत आवेदन स्वीकृति हुने छैन ।
विभागले श्रम मन्त्रालयमार्फत कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीमा इजरायल रोजगारीको लागि परीक्षा गराउनु पर्नेबारे जानकारी गराउँदै परीक्षा गर्ने मिति पनि प्रस्ताव गरेको छ । विभागको इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर बहादुर सुनुवारका अनुसार आवेदन स्वीकृत हुनेहरूको परीक्षा यही भदौ १५ देखि २० भित्र गर्ने भनेर सीसीएमसीमा अनुरोध गरिएको छ । तर कोरोना महामारीको यो समयमा परीक्षा सञ्चालनका लागि सीसीएमसीकै निर्णय कुर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यदि सीसीएमसीले अनुमति दिएमा विभागले परीक्षा केन्द्र तोक्ने, परीक्षा समय र मिति बारे पनि आवेदकलाई जानकारी गराउनेछ ।